I-AppSheet: Yakha Futhi Usebenzise Uhlelo Lokusebenza Lokuvunyelwa Okuqukethwe Nge-Google AmaSpredishithi | Martech Zone
I-AppSheet: Yakha Futhi Usebenzise Uhlelo Lokusebenza Lokuvunyelwa Okuqukethwe Nge-Google AmaSpredishithi
NgoLwesibili, ngo-Mashi 16, i-2021 NgoLwesibili, ngo-Mashi 16, i-2021 Douglas Karr
Ngenkathi ngisakhula ngezikhathi ezithile, ngintula ithalente noma isikhathi sokuba umqambi wesikhathi esigcwele. Ngiyalwazisa ulwazi enginalo - luyangisiza ukuvala igebe phakathi kwezinsiza zentuthuko namabhizinisi anenkinga nsuku zonke. Kepha… angibhekile ukuqhubeka nokufunda.
Kunezizathu ezimbalwa zokuthi ukuqhubekisela phambili ubuchwepheshe bami bokuhlela kungesilo isu elihle:
Kuleli qophelo lomsebenzi wami - ubuchwepheshe bami buyadingeka kwenye indawo.
Isizathu esikhudlwana, nokho, yingoba angikholwa ukuthi isidingo sabasuthi esingasuthiseki sizohlala njalo.
Kungani? Ngoba amapulatifomu amakhulu athumela izixazululo ezinhle ezingekho zamakhodi.
Ayikho i-Code, Codeless, ne-Low Code Solutions
Isigaba esilandelayo sobuchwepheshe bedijithali singaba mnandi kakhulu kunanoma yikuphi ukuthuthuka esikubone isikhashana. Izinkampani ezinkulu zakha izixazululo zokudonsa nezilahla (azikho ikhodi noma ezingenakhodi) izixazululo ezinhle ngobuhlanya. Ithuba lalezi zinhlelo alinamkhawulo njengoba abaholi bebhizinisi empeleni bengadingi inkampani yezentuthuko ukuletha isisombululo sabo kusuka kumdwebo we-napkin ukuya kuhlelo lokusebenza oluphelele.
Uma usebenzisa Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle yenhlangano yakho (ngiyincoma kakhulu), sebethule i-AppSheet - umakhi wohlelo lokusebenza ongenamakhodi! Nge I-AppSheet, ungakha ngokushesha izinhlelo zokusebenza zenkambiso ukusiza ukwenza lula, ukuzenzekelayo, nokwenza umsebenzi ube lula. Akukho ukufaka amakhodi okudingekayo.
Noma ubani ku-Google Workspace yakho angadala futhi aphathe izinhlelo zakhe zokusebenza… ezingakhuphula umkhiqizo weqembu lakho, zinciphise amaphutha, futhi zinciphise ukusilela emuva kwethimba lakho lokuthuthukisa.
Isicelo Sokuvunyelwa Kokuqukethwe kwe-AppSheet
Nasi isibonelo esihle, a Isicelo sokuvunywa kwabaphathi efaka i-Google AmaSpredishithi ne-AppSheet ukusunduza kalula okuqukethwe ngenqubo yokuvunywa kwezinyathelo ngezinyathelo.
Lolu hlelo lokusebenza oluthile luxhunywe ku-Google AmaSpredishithi kuphela, kepha ungahlanganisa noma imuphi umthombo wedatha ongawuthanda.
Sebenzisa ku-iTunes noma ku-Google Play
Ingxenye engcono kakhulu? Uhlelo lokusebenza ovele uchithe isikhathi ulwakha ngaphandle kolayini wekhodi akuyona nje i- uhlelo lokusebenza lewebhu esebenza kusiphequluli, i-AppSheet ivumela abasebenzisi ukuthi benze inguqulo ye-whitelabel yohlelo lokusebenza ongayisebenzisa ku-Google Play noma ku-iPhone nge-iTunes.
Ukuthunyelwa kudinga ilayisense elincane le-AppSheet elisuselwa kumsebenzisi okhokhelwayo noma ukubandakanyeka kwe-PRO.
Ukudalula: Ngisebenzisa eyami -Google ikhodi yokuxhumana lapha.
Tags: i-apula iosishidiengenamakhodiuhlelo lokusebenza lokuvumela okuqukethweuhlelo lokusebenza le-googleishidi lezinhlelo zokusebenza ze-googlegoogle ibhizinisigoogle ukudlalaindawo yokusebenza ye-googlegsuiteiOSuhlelo lokusebenza iOSitunesuhlelo lokusebenza lweselulaayikho ikhodiakukho-code app builder
Ubudlelwano Phakathi Kwabantu, Uhambo Lomthengi, Nemigodi Yokuthengisa
I-JungleScout: Amathuluzi Noqeqesho Lokuqalisa Nokukhulisa Ukuthengisa Kwakho Ku-Amazon